( यो कथा कथोपन्यास 'क्यानभासमा कोरिएका कथाहरू' को एउटा श्रृङ्खला हो । कथाकार अनामिकाको अचानक कथाकार दिवाकर नेपालीसँग 'समयको क्यानभासमा' कथामा भेट भएपछि जन्मिएका कथाहरू हुन् यी । त्यसैले यस कथामा कथाकार दिवाकर नेपालीलाई सम्बोधन गरिएको छ । - लेखिका )
कथाकार दिवाकर नेपालीज्यू, मानिसभित्र अतृप्त चाहनाको शृंखला कसरी खडा हुँदोरहेछ र कसरी भत्कँदो रहेछ अनि फेरि कसरी उठ्दो रहेछ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण हामीबीच भएको एउटा घटनाबाट म यहाँ उदधृत गर्न गइरहेको छु । यो घटनाको नायक नायिका हामी दुवै हौँ तर तपाई यस घटनाको पहिलो चरणसम्म तपाई विज्ञ हुनुहुन्छ भने दोस्रो चरणप्रति पुरै अनभिज्ञ । आज यो कथाको माध्यमबाट त्यस घटनालाई मेरो कथालयको स्क्रीनमा लग इन गर्न गइरहेको छु ।
कथाको प्रारम्भको घटनाप्रति त तपाई पनि विज्ञ हुनुहुन्छ । जब तपाईले मसँग भेट गर्ने मनसाय मेल मार्फत व्यक्त गर्नु भयो तब म काठमाडौ आउने प्रयोजन मिलाउन थालेँ । तपाईसँग भेट गर्नका लागि नै भनेर मलाई काठमाडौँ आउन घरबाट अनुमति नमिल्न सक्थ्यो । त्यसैले अफिसियल काम देखाउने बहाना गर्न थाले । नभन्दै क्याम्पसमा पुस्तकालयका लागि समालोचना, साहित्य, राजनीति शास्त्र, अर्थ शास्त्रसम्बन्धी पुस्तकहरु चाहिने भयो । यसको लागि म नै काठमाडौँ आउने तारतम्य मिलाउन थालेँ । नभन्दै मलाई अफिस र घरबाट जाने अनुमति मिल्यो । काठमाडौँ आउने भएपछि तपाईसँग बारम्बार मोबाइलमा सर्म्पर्क भइरहेको थियो । मेरो फ्लाइट बिहानको थियो । मलाई भेट्नका लागि तीनकुनेमा कान्तिपुर पब्लिकेशनको अगाडि कुरा भएको थियो । शायद तपाईँको त्यहाँ कुनै काम हुनसक्थ्यो ।
हाम्रो मोबाइलमा बारम्बार सम्पर्क भइरहेकोथ्यो तर दुर्भाग्यवश त्यो दिनको फ्लाइट डिले हुँदै गयो । अन्तिममा त्यो दिनको फ्लाइट नै नहुने सूचना एयरलाइन्सले दियो । आकाशमा हुस्सु वा बादल बढी भएको कारणले यस्तो भएको हो भन्ने जानकारी एयरलाइन्सले दिएको थियो । त्यो दिन हाम्रो भेट हुन सकेन मन खिन्न भयो । भोलिपल्ट पनि निकै ढिला मेरो फ्लाइटको पालो आयो । काठमाडौँ आउँदा झमक्कै साँझ परिसकेको थियो । हाम्रो भेट हुने सम्भावना नै भएन । त्यसपछि म ट्याक्सी लिएर सिधै बहिनीजुवाइको घर कोटेश्वर गएँ । बहिनीको घरमा बहिनीजुवाइसँग भलाकुसारी भयो । उनीहरु दुवै कानुनव्यवसायी हुनाले खासै साहित्यिक गफ हुनसकेन । त्यहीबेला तपाइँले फोन गरेर भोलिपल्ट माइतीघर मण्डला छेउमा रहेको रत्नपुस्तक भण्डारमा २ बजे भेट गर्ने खबर गर्नुभयो । मैले "हुन्छ" भने ।
कथाकार दिवाकर नेपालीज्यू, यहाँसम्मको घटनाप्रति तपाईपनि बिज्ञ हुनुहुन्छ किनभने हाम्रो दुरभाषबाट सर्म्पर्क भइरहेको थियो । यसपछि को घटना अत्यन्त नाटकीय जस्तो छ । तर यो यथार्थ हो । किनभने यसको प्रमुख पात्र तपाईँ नै हुनुहुन्छ । त्यसैले अविश्वास गर्ने कुरै भएन ।
भोलिपल्ट माइतीघरमा भेट्ने कुराले म सारै पुलकित र हषिर्त भएकी थिएँ । यति ठूलो साहित्यकारसँग जीवनमा पहिलो पल्ट भेट्दै थिएँ । कसरी बोल्ने होला भनी मनमा अनेकौ भावनाका तरङ्गहरु तरङ्गति भइरहेका थिए । सदाझैँ विहान उठेँ । तर आजको विहान किन हो अर्कै लागिरहेकोथ्यो । काठमाडौँको उत्तर दिशामा कुन हिमाल हो मुसुक्क हाँसिरहेको जस्तो लाग्यो । हावाको चिसो स्पर्शले मनलाई उमंगित बनाइरहेको थियो । तराइको वातावरणभन्दा यहाँको बेग्लै थियो । चारैतिर घरैघर, यत्रा मानिस को भीडमा म कसैलाई भेट्न जाँदैछु । मन रोमाञ्चित भयो । कोटेश्वरबाट माइतीघर आउन खासै अलमलिनु परेन । म नयाँ मान्छे भएपनि सजिलै आइपुगेँ । समयको अडकल राम्ररी गर्न नसकेर म एक घण्टा अगाडि नै आइपुगेछु । तर रत्नपुस्तक भण्डारमा प्रशस्त पुस्तक हुने हुनाले समय बिताउन मलाई खासै गारो भएन । घडीमा दुइ बजिसकेको थियो । अब त पक्कै आउनुभयो होला भन्ने ठानेर यताउता हेरे तर कतै देखिनँ । तपाईले चिन्नु नभए पनि म चिनिहाल्छु नि भनेर कल पनि गरिन । दुइबाट घडीको सुई अढाईमा पुग्यो । तर पनि तपाईँ आउनु भएन । त्यसपछि मन बेचैनजस्तो भयो ।
यसरी समय दिएर पनि समयमा नआउने मान्छेको के सङ्गत गर्नुजस्तो लाग्यो । मनमा अनेकौँ शंका उपशंकाको आँधिबेरी चल्न थाल्यो । काठमाडौँको मान्छे कस्तो खालका हुन् । लाग्नेमान्छेको जात नारीलाई खेलौनाजस्ता ठान्छन् उनीहरुको भावनामाथि खेलवाड गर्छन । अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि छोडिदिन्छन् । प्राय: लोग्ने मान्छेको बारेमा मैले यस्तै पढेकी र सुनेकी छु । मनका कुभावनालाई नियन्त्रण गर्न धेरै कोशिश गरें तर सकिनँ । त्यसपछि मोबाइल डायल गरें, सम्पर्क भएन । यसो पसलबाट बाहिर हेरेको त्रिपुरेश्वरबाट र वानेश्वरबाट दुइवटा जुलुस आउँदै गरेको देखेँ । राष्ट्रपतिले सेनापति प्रकरणमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै माओवादीले विशाल जुलुस निकालेको रहेछ । पसलले आत्तिदै भन्यो "मैडम तपाईँ घर जानुहोस् । हामी पसल बन्द गर्र्छौ ।" म आत्तिदै कता जाउँ कता भयो । अब ट्याक्सी लिएर घरै र्फकनु पर्यो भनेर बाहिर निस्कें र सिहदरवारतिर लागेँ । बाटो क्रस गर्न मात्र लागेको थिए परबाट स्पिडमा आएको मोटरसाइकलले मलाई हान्यो । त्यसपछि के भयो मैले थाहा पाउन सकिनँ । मलाई होश आउँदा म हस्पिटलमा थिएँ । छेउमा बाहिनीजुवाइ बसेका थिए ।
मलाई मोटरसाइकलले हानेपछि कुनै भद्रपुरुषले मलाई हस्पिटल ल्याइदिएछन् । हस्पिटलमा मेरो बहिनीको जेठाजु डाक्टर हुनुभएकोले मलाई चिन्नुभएछ र ट्रीटमेन्ट चलाउनु भएछ । मलाई होश नआएकोले दुइदिनसम्म आइसियूमा राखिएछ । दुइ दिनसम्म तिनै भद्रपुरुष मलाई हेर्न आएछन् । त्यसपछि मलाई होश आएछ र वार्डमा सारिएछ । त्यसपछि ती भद्रपुरुष पनि आउन छाडेछन् । मेरो मोबाइलसहितको ब्याग त्यही भीडमा कसैले गायब गरिदिएछ । यी कुरा मेरी बहिनीका जेठाजु तिनै डाक्टर जुवाइले सुनाएका थिए । जो त्यहाँका डाक्टर थिए । ती भद्रपुरुष को थिए जसले मेरो ज्यान बचाएका थिए, तिनलाई भेटेर धन्यवाद दिने औधी इच्छा थियो । तर ती डाक्टरले ती भद्रपुरुषको नाम सोधीखोजी नगरेको हुनाले मेरो इच्छालाई बाध्यताको डोरीले नराम्ररी बाँधिदियो ।
मेरो अवस्था अझै पनि त्यति राम्रो थिएन । बिस्तारै चक्कर लाग्न कम हुँदै गएको थियो र सबै पुर्वस्मृतिहरुको झल्का मस्तिष्कमा आउन थालेका थिए । मलाई तपाईँप्रति वितृष्णा जाग्यो । तपाईँले मलाई ठूलो धोका दिनुभएको भनी मन सारै कुण्ठित भयो । तपाईँ मलाई समयमा भेट गर्न आउनुभएको भए म एक्सिडेन्टमा पर्ने थिइन भन्ने लाग्यो । मेरो शरीर र सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको थियो । बहिनीजुवाइँ पनि काठमाडौँको व्यस्तताले चुटेका मान्छेलाई धेरै गारो भएको थियो । तपाईको व्यवहारबाट कुण्ठित भएको मनमा अनेकौँ भावानाले उथुलपुथुल मचाउन थाल्यो । मेरो व्यथा कसैलाई सुनाउन सक्दिनथेँ । व्यथाले हृदयलाई विनायोले रेटेझै रेट्न थालेपछि भावानाहरु सारगीका धुन बनेर यसरी शब्द पग्लन थाले ।
कुँडिएर यो मन त्यसै टुट्न खोज्छ
कुहिएर फल नपाक्तै झर्न खोज्छ
म पढदै थिएँ । नागरिकको तपाइंको रंगिन फोटो देखाउँदै उही डाक्टर जुवाइले भने "हेर्नोस् दिदी तपाइंलाई हस्पिटल ल्याउने मान्छे यिनै हुन्, अहिले फोटो देखेपछि मलाई सम्झना आयो ।"
यो सुनेपछि म छाँगोबाट खसेजस्तै भएँ । कथाकार दिवाकर नेपालीज्यू हस्पिटलमा मलाई ल्याएर मेरो प्राण बचाउने महान पुरुष तपाईँ नै हुनुहुँदो रहेछ । तपाईप्रति मैले कति नकरात्मक धराणा राखेकी थिएँ । अहिले ती सबै सलिदै जान थाले । तपाईको मानवताप्रतिको महान भावना देखेर मन त्यसै प्रफुल्लित भएर आयो । यसरी को हो को हो नचिनेको मान्छेको उद्धार गर्नु कति ठूलो उदार हृदयको परिचय थियो । मानवताविहीन मानिसका भीडमा तपाईको मानवीय भावना देखेर म अत्यन्त प्रभावित भएँ । अहिले यो कुरा थाहा पाएर तपाईँ पनि अचम्मित हुनुभयो होला ।
त्यसपछि म घरमा ल्याइएँ। तपाईँसँग मोबाइलबाट सम्पर्क गर्न खोज्दा मेरो मोबाइल नै हराइसकेको थियो । म घरमा ल्याइए पनि बेडरेस्टमा थिएँ । मन र मस्तिष्कमा तपाईँकै विषयमा अनेकौँ कुरा खेलिरहेका थिए । तपाईँसँग कसरी सम्पर्क गर्ने होला भनी मनमा अनेकौँ उपायहरु पत्ता लगाउन थालें । सायद तपाईले पनि मलाई सम्पर्क गर्न खोज्नुभयो होला ।
एकान्तिक समयमा मनको भावनासँग खेल्ने र कल्पना गर्ने उपर्युक्त हुँदोरहेछ । यही समय तपाइको विषयमा मनमा अनेकौँ जिज्ञासा, उत्कण्ठा र धारणाहरु जन्मिए । तपाईको पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो होला - घर कस्तो होला - छोराछोरी कति होलान् - आदि विषयमा मनमा अनेकौँ जिज्ञासाहरु उम्रे । तपाईभित्र भएको मानवताको उच्चताको परिचय तपाईले दिइसक्नु भएको थियो । त्यसले तपाईको व्यक्तित्व, आचरण र व्यवहारको आधा झिल्को प्रकाशित भइसकेको थियो । अरु धेरै व्यक्तिगत कुराप्रति म अनभिज्ञ थिएँ । मनमा तिनै तपाइँका व्यक्तिगत कुरासँग तपाईसँग भेट भएको समयसँग लुकामारी खेल्दै दिन बिताउन थालेँ । म यति ठूलो एक्सिडेन्टमा पर्दा पनि मेरा श्रीमानले खासै चासो देखाएका थिएनन् । मन त्यसै रित्तोजस्तो भएको थियो । यसरी मृत्युको मुखमा पुगर फर्केका मान्छेको मन कोमल हुँदो रहेछ अनि रित्तो पनि । त्यसमा माया, स्नेह र सान्त्वानाले भरिदिनु पर्दो रहेछ । तर यी कुराबाट म बञ्चित थिएँ । मन त्यसै भौतारिन थाल्यो । तपाईले यो कुरा थाहा पाउनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला मनमा यिनै कल्पनाका लहराहरु बेरिए । छेउमा तपाईको कथा छापिएको उही नागरिक पत्रिका थियो । उठाएर तपाईको फोटो हेरेँ । तपाईको रङ्गीन फोटोले मलाई नै हेरेर हाँसेजस्तो लाग्यो । कथा नयाँ प्रयोगको अत्यन्त सुन्दर भाव र शैलीमा थियो । अनासय मेरो रित्तो मन के केले भरिदै आयो । कसैको मीठो र्स्पर्श, आत्मीयभावको तरंगित ध्वनि मेरो कानमा प्रतिध्वनित भयो । मन त्यसै हर्ष र खुसीले छचल्किन थाल्यो । कतै पोखिएला कि पोखिएला भएर उकुसमुकुस हुन थाल्यो । तपाईँको फोटो हेरिरहन सकिनँ । आँखा चिम्म गरें । सबै भावहरु ओठबाट तपाइँको तस्बिरमा पोखिइ रहेका थिए ।
म वेहोश हुँला जस्ती भएँ । तन्द्राजस्तै एकछिनपछि तस्वीरबाट तपाइँको शरीर बाहिर निस्केर मसँग बेडमा टाँसीएर बसेको थियो । मलाई अचम्म लाग्यो हेरेँ उही तपाईँको प्रतिरुप थियो त्यो । तपाइँले बिस्तारै मेरो हात सुमसुमाउनु थाल्नुभयो र चुम्नुभयो । मेरो आँखामा अविरल प्रेमको प्रवाह फैलाउँदै भन्नुभयो "मैले गर्दा तपाईँले यति ठूलो दुख भोग्नुपर्यो अनामिकाजी -" अहिले तपाईँ मलाई बहिनीबाट अनामिकाजी भनेर सम्बोधन गर्दैहुनुहुन्थ्यो ।
म अकमक्क परे यो भ्रम हो कि यथार्थ हो - म केही बोल्न सकिरहेको थिइनँ । तपाईँका सुन्दर आँखामा असिमित प्रेमका छालहरु सलबलाइ रहेको मैले पाइरहेको थिएँ । तपाईँले मेरो अन्तर्मन बुझेझै गरि भन्नुभयो "यो भ्रम होइन अनामिकाजी यथार्थ हो । तर कुनै पनि यथार्थ अन्तिम हुँदैन । तपाईँले यो अवस्था भोग्नु परेकोमा म अत्यन्त दुखी छु ।" तपाईँले आत्मीय भावले पोखिएको शब्द शब्दमा म स्वयम पोखिइरहेको थिएँ । मनको खुसीले भ्रमका सबै सिमानाहरु भत्काउँदै थिए । मेरो मन त्यसै उमंगित र हर्षित भयो । मनको हर्ष नशा नशामा घोलिएर शरीरभरि छरियो । कस्तो मिठास थियो त्यो मिलनमा । मेरो मन रोमाञ्चित भयो । मेरो मनले भन्यो यो अन्तिम सत्य भैदिए हुने नि । तपाईँले फेरि मेरो मनको पाठ बुझेझै गरेर भन्नुभयो "होइन यो अन्तिम सत्य होइन अनामिकाजी । हामी फेरि विनिर्मित भएर भेटिनेछौ ।"
यति भनेर तपाईँले मेरो ओठमा गहिरो चुम्बन गरेर बिलाउनुभयो । मेरा आँखा चिम्म नै थिए । सबै खुसीहरु आँखाभित्र नै लुकाएर राख्न चाहन्थेँ कतै खोलेपछि पोखिएर वा उडेर हराउने पो होकि - म त्यो खुसी हृदयभरि सँगालेर बाँच्न चाहन्थेँ । त्यसैले मैले आँखा खोल्ने इच्छा नै गरिन।
बाहिर कसैले ढोका ढकढक गरिरहेको थियो । म झस्केँ । आँखा खोलेँ । अघिको तन्द्रा सपना हो कि विपनाजस्तो लाग्यो । अझै पनि तपाइँको फोटो मेरो ओठमा टास्सिरहेको थियो । निकाल्न थोरै बल गर्नु पर्यो । फोटो चिसो ओठले भिजेर सुकिसकेको थियो ।
जुवाइँले यसो भन्नुहुँदा कताकता भित्र दुखेर आयो । श्रीमानको मप्रतिको कुण्ठित मनको तिक्तता जुवाइँलाई अप्रत्यक्षरुपमा पोख्तै भने "हैन अस्ति म मरेको भएपनि आज दसौँदिन भइसक्थ्यो । आज त कोराको ढिकुरो पनि फुटाइसक्थे होलान् भनेर सम्झेको ।"
बहिनीले झर्कंदै भनी "आ ˜ दिदी पनि कस्तो नराम्रो कुरा सोच्नुभएको । राम्रोराम्रो कुरा सोच्नुपर्छ नि । आखिर तपाईँलाई जाति भइहाल्यो नि ।"
बहिनीजुवाईँसँग केही समय यस्तै कुराको दोहरी चल्यो । उनीहरु आफ्नो कोठामा गए । म भने तपाईँसँग बिताएको अघिको तन्द्रामा अल्झन पुगेँ । वरिपरि तपाइको छायाले पछ्याएझै लाग्यो । त्यो मीठो अनुभुति कतै हराउला वा फुत्केर जाला भनेर फेरि ओछ्यानमा पल्टेर आँखा चिम्ले तर अहिले सबै यथार्थ थियो । दिनभरि उही तपाईँको सम्झनामा र मीठो स्पर्शमा डुबेको क्षणमा आफूलाई डुबाइरहे । उही सम्झनामा अल्झिरहेँ अनि ठोक्किरहेँ । कोठा भरि जता हेरे पनि म उही दृस्यमा ठोक्किन पुग्थें । बहिनीजुवाईले ल्याएका कितावमा तपाइँको बाल्यकालको सस्मरण भएको पुस्तक रहेछ । त्यो पढें, मन आनन्दित भयो । तपाइँले आफूलाई कति पनि नढाटी नछली सत्यकुरा छर्लंग पोख्नुभएको रहेछ । तपाईँको पारदर्शी बिचारधारा देखेर मन अझ प्रफुल्लित भयो । साँझ दसबजेसम्म तपाईँको किताव पढेँ । त्यसपछि निन्द्रादेवीको निमन्त्रणामा आँखा चिम्लन पुगेँ ।
मध्यरातमा अचानक मेरो आँखा उघ्रियो । मैले अनौठो सपना देखेको रहेछु । ब्युंझंदा आफैलाई अचम्म लाग्यो कस्तो सपना देखें भनेर सपना यस प्रकारको थियो ।
एकछिन पछि तेस्रो गोरेटो हुँदै अलिक पर पुग्यौँ । त्यहाँ एउटा अति सुन्दर मूर्ति थियो । मूर्तिको छेउमा एउटा सूचना पाटीमा यस्तो लेखिएको थियो "यो मूर्तिमा जसले आफ्नो मुटु र मस्तिष्क दिन्छ र यदि दिइएको त्यो मुटु र मस्तिष्कबाट यो मूर्ति चलायमान भयो भने यसले संसारलाई नयाँ प्रकाश दिनेछ र मानवहितको कल्याण गर्नेछ । मूर्ति छेउमा यस्तो लेखिएको देखेर तपाईँ टक्क अडिनुभयो र मलाई भन्नुभयो "अनामिकाजी तपाईँ यो पढनुस त !"
मैले भने "मलाई किन तपाईँ भन्नुभएको मलाई तिमी भन्दा पनि हुन्छ तपाईँ विराट व्यक्तित्त्वको धनि म कहा सूक्ष्म जीव !"
"हैन अनामिकाजी सबैको आत्माको सम्मान गर्नुपर्छ । मेरो बसमा भए त म निर्जीववस्तुलाई तपाइँ भनेर सम्बोधन गर्दथे किनभने त्यो पनि चलायमान बस्तु हो त्यस्का प्रत्येक परमाणु अस्थिर हुन्छन् त्यसैले सृष्टिको सबै बस्तुलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु ।" तपाईँको यो दर्शनबाट म अनुत्तरित भएँ । तपाईँले फेरि भन्नुभयो "आउनुहोस् अनामिकाजी मानवकल्याणको लागि यो नश्वर शरीर उर्त्र्सग गरौँ। तपाईँ र म भएर यो अदीप्यमान मुर्तिलाई जीवित बनाऔँ तपाईँ आफ्नो मुटु दिनुहोस् र म आफ्नो मस्तिष्क दिन्छु ।"
तपाईँले यसो भन्नुहुँदा म अकमकाएँ र भनेँ "मैले मेरो मुटु दिएमा भने म मरिहाल्छु नि कथाकारज्यु, अनि मेरो छोराछोरी, सम्पत्ति, मेरो यो सौर्न्दर्य -"
तपाईँले फेरि भन्नुभयो "यी सब बित्था हुन्, क्षणिक हुन, भ्रम हुन अनामिकाज्यु । हामी भ्रममा धेरै नबाचौँ । यदि यो मूर्तिले हाम्रो मुटु र मस्तिष्क लिन मानेर चलायमान भएमा हामी अमर हुन्छौ । हामी कहिल्यै मर्ने छैनौँ । हामी तबसम्म अन्तिम सत्य हुन्छौँ जब सम्म कुनै पनि सत्यको प्रारम्भ हुँदैन । फेरि मूर्तिले मानवसमाजको कल्याणको लागि नया प्रकाश र्छर्नेछ।"
यतिञ्जेलसम्म हामी भावनात्मकरुपले , सैद्धान्तिकरुपले र प्रायोगिक रुपले एक भएका थियौ । मभित्र तपाइँको वैचारिक सिद्धान्तले विजेताको झन्डा गाडिसकेको थियो । त्यसैले मैले अस्वीकार गरिन । तपाईँले भन्नुभयो ‘अनामिकाज्यु म मेरो मस्तिष्क यो मुर्तिलाइ प्रत्यारोपण गर्छु यसपछि यो मूर्ति चलायमान भयो भने तपाईँ आफ्नो मुटु प्रत्यारोपण गर्नुहोला ।‘ स्वयम ज्ञान र विवेकको पुजारीको आराधनामा मपनि स्वीकृतिको आरती उतार्न पुग्छु ।
एकछिनपछि तपाईँले आफ्नो मस्तिष्क प्रत्यारोपण गर्नुभयो । तपाईँको मस्तिष्क प्रत्यारोपण भएपछि तपाईँको निर्जीव शरीर भुइमा लडिरहेको थियो । म तपाईँको निर्जीव शरीर र मूर्तिलाई पालैपालो हेरिरहेकी थिएँ । एकछिनपछि मूर्तिका आँखाहरु पिलपिल गरेर चल्न थाले । मलाई अचम्म लाग्यो तर डर भने पटक्क लागेको थिएन । ती आँखामा तपाईका आँखाका प्रतिविम्व देखिन्थे । मलाई लाग्थ्यो मूर्तिमा तपाईँका आँखा नै राखिएका हुन् । त्यसपछि मलाई ठूलो साहस आयो र सूचनापार्टी लेखिएको कुरा सत्य रहेछ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्यो । मैले पनि निर्धक्क आँखा चिम्म गरेर आफ्नो मुटु त्यो मूर्तिमा प्रत्यारोपण गरे । मेरो मुटु त्यसमूर्तिमा प्रत्यारोपण गरेपछि साँच्चै नै त्यो मूर्ति चलायमान हुन थाल्यो । छेउमा मेरो सुन्दर भौतिक शरीर लडिरहेको थियो । हामी मूर्तिभित्र नै संवाद गरिरहेका थियौँ ।
"अनामिकाज्यु यो मूर्ति समाजको लागि प्रज्जल्यमान दीपक हुनेछ । अमेरिकाको स्टाच्यु अफ लिवरटीजस्तै यसले धेरै टाढा टाढा परादेशीय दाजुभाइ दिदीबहिनीको उद्धार गर्नेछ ।"
म भन्दै थिएँ "हो कथाकारज्यु हामी यो मूर्तिसँगै युगौयुग बाँच्नेछौँ । अहिले मलाई आफू जन्मेको र मरेकोमा गर्व अनुभव भइरहेछ । तपाईँको समिप्यताले मलाई सौभाग्यको उच्चविन्दुमा पुयाएको छ । "
साच्चै हामीदूइ यस मूर्तिबाट जीवित भएका थियौँ । हेर्दाहेर्दै धेरै मानिसहरु आए हाम्रो दर्शन गर्न । तिनीहरुले हाम्रो भौतिक शरीर कहाँ लगे के गरे हामीले थाहा पाएनौँ । तिनीहरु र मूर्तिबाट निस्केको अलौकिक प्रकाश अलिकति बोकेर जान्थे । यसरी आउन नसक्नेलाई तपाईँ मस्तिष्कबाट हात र खुट्टाहरुलाई अहाउनुहुन्थ्यो । त्यो अदभूत मूर्तिका हात र खुट्टाहरु जहाँ पनि पुग्न सक्थे र आफ्ना प्रकाश छर्न सक्थे । हेर्दाहेर्दै त्यो मूर्तिको विरोध गर्ने मान्छेहरु पनि निस्किए । यसरी विरोध हुँदा त्यो मूर्ति आफै रुप फेर्ने गर्दथ्यो । त्यो मूर्ति कहिले गौतम बुद्धको रुप धारणा गर्दथ्यो , कहिले प्रमिथस कहिले जिजस क्राइष्ट त कहिले गौतम वुध्द आदिको विभिन्न महापुरुषहरुको रुप धारणा गर्दथ्यो । यसरी मायावी शक्तिले रुप धारणा गर्न थालेपछि विरोधी मान्छेहरु पनि विरोध गर्न छाडे । उनीहरु साँच्चै त्यो मायावी मूर्तिको शक्तिमा विश्वास गर्न थाले । त्यस मूर्तिबाट प्रेमको नयाँ किरण फैलिएको थियो । जसलाई मानिसहरुले मायाकी देवी अर्थात स्टयाच्यु अफ लव को नामले पूजा गर्न थाले । नयाँ युग, नयाँ चेतना र नयाँ धारणा बोकेर प्रज्ज्वलित भएको त्यो मूर्तिले प्रेमको सन्देश दिइरहेको थियो ।
मलाई अचम्म लागिरहेको थियो मैले कस्तो सपना देखें भनेर । त्यसपछि म निदाउन सकिन । नयाँ बिहानीको पर्खाइमा समय बिताएँ । उज्यालोले घुम्टो खोलेपछि पुन: तपाईँको सम्झनाको पर्खालमा ठोक्किन पुगेँ । मनमा छटपटी बढ्न थाल्यो । छटपटीको बिछ्यौनामा पल्टदापल्टदै एउटा उपाय पगार्न पुगेँ । त्यसपछि एकजना भाइ पर्ने जो साहित्यमा रुची राख्थे र केही साहित्यिक व्यक्तिसँगै उसको सम्पर्क पनि थियो, उसलाई तपाईको मोबाइल नम्बर पत्ता लगाउन पठाए । उसले पनि कसरी हो पत्ता लगाएर लिएर आयो । मैले सम्पर्क गरेँ तर ‘स्वीच अफ गरिएको छ’ भन्ने प्रतिउत्तर आयो । मैले बारम्बार सम्पर्क गरेँ तर यस्तै भनीरहयो । झर्को लागेर सम्पर्क गर्न छाडें ।
के भएछ यस्तो भनेर उही भाइपर्नेलाई सोधीखोजी गर्न पठाए । उसले पनि साहित्यिक माहौलमा तपाई अन्तर्राष्टय सम्मेलनमा भाग लिन जानुभएको सामाचार लिएर आयो । त्यसपछि भने मन केही शान्त भयो । तपाईलाई भेट गर्ने मनको तृष्णाले मलाई खाइरह्यो । अझ भेट्नेभन्दा पनि यो घटनाको जानकारी दिने कुतुहलताले मलाई छोपिरह्यो । तपाईसँग सम्पर्क गर्ने अर्को उपाय मेल थियो । तर घरबाट बाहिर जान नसक्ने अवस्थाले मेल गर्न पनि पाइनँ । केही दिन यस्तै अतृप्त चाहनाको बादलमा मडारिदै दिन बिताएँ । राम्ररी निको भएपछि घर जाने अघिल्लो दिन साइवरको मेलमा बसेँ । इनबक्समा तपाईको मेल आएको रहेछ जुन यस प्रकारको थियो -
"प्रिय बहिनी अनामिका
तपाईलाई भेट्न म आउदै थिएँ । बाटोमा जुलुसले गाडी जाममा पर्यो, मोबाइलमा सम्पर्क गरेँ, सम्पर्क हुन सकेन । तपाईलाई यसरी पर्खाएर राख्नुपर्दा म सारै लज्जित भएको छु । म आउँदा तपाई त्यहाँ हुनुहुन्नथ्यो । छेउमा चोकमा एउटा लेडिजलाई मोटरसाइकलले हानेर तनाव थियो । म त्यतै लागें । ती लेडिजलाई अस्पातल पुर्याएँ । तिनी बेहाश थिइन्, अहिले कस्ति भइन् कोनी - तपाईलाई धेरै सर्म्पर्क गरेँ, हुन सकेन । म अहिले बाहिर छु । फर्केपछि सम्पर्क गर्नेछु ।"
दिवाकरज्यू, तपाईको मेल पढ्नु अघि नै मैले यो कथा लेखिसकेको थिएँ । अब मेलबाट जानकारी दिनुभन्दा कथा छापिएपछि थाहा पाउनु अर्कै रोमाञ्चकता हुन्छ भन्ने ठानी यो कथा काठमाडौँको एउटा पत्रिकामा छोडेर घर फर्किएँ ।
Whatagreat Story de !!! Keep going .......